Njirimara na ịmata ihe nke nnukwu ọdọ mmiri nke North America | Netwọk Mgbasa Ozi
Osimiri bụ mmiri dị mma nke dị na ala. N'okwu a, anyị agaghị ekwu maka ọdọ mmiri dị iche iche ma ọ bụ nhazi ha, kama anyị ga-arara isiokwu a nye Nnukwu ọdọ mmiri. Ọ bụ otu nnukwu ọdọ mmiri 5 nke na-eme n'etiti ala United States na Canada. Ọdọ mmiri ndị a na-emebi atụmatụ nke ihe niile anyị na-ahụbu ịhụ. N'ihi nke a, echere m na ọ bara uru ịrara ọkwa a iji mata ọzụzụ ya niile na nsonaazụ ha nwere na mpaghara ndị ọzọ nke gbara ya gburugburu.
Youchọrọ ịmatakwu banyere Great Lakes nke North America?
1 Njirimara nke nnukwu ọdọ mmiri 5
2 Ọdọ erie
3 Ọdọ Huron
4 Ọdọ mmiri Michigan
5 Ọdọ mmiri Ontario
6 Ọdọ mmiri dị elu
7 Curfọdụ ịmata ihe nke nnukwu ọdọ mmiri
Njirimara nke nnukwu ọdọ mmiri 5
Emebeghi ọdọ mmiri ndị a ka ndị nke ha kwesịrị ịdị. Ndị ọkà mmụta sayensị kwubiri na guzobere ihe dịka afọ 13.000 gara aga, mgbe ikpeazụ Ice afọ. Ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ice na-abịa site n'ugwu glaciers, guzobere ọwa zuru oke dị ugbu a nke na-ejedebe na mbara ala na oke nkụda mmụọ. N'okwu a, site na ị na-eme efere ebe ala ahụ chọrọ maka nchekwa mmiri, ọ ga-ekwe omume ịmepụta ihe taa anyị maara dịka Osimiri Ukwu.
N'etiti ọdọ mmiri 5 ha na-ekpuchi mkpokọta kilomita 244.160. Mmiri a kwekọrọ na 21% nke mmiri zuru oke n'ụwa. Data a na - eme ka anyị chee echiche banyere ịdị mkpa ọdọ mmiri ndị a ọ bụghị naanị maka usoro okike, kamakwa maka mmadụ.
N’agbanyeghi n’anyị na-akpọ ọdọ mmiri ndị a aha dị ka ụlọ ọrụ dị iche iche, ebe a na-etolite n’otu kọntinent ma na-adịghị anya site na ibe ha, ha na-ejikọrịta onwe ha. N'ụzọ dị otú a, ha na-emepụta mmiri na-aga n'ihu na-aga n'ihu nke na-agba ume ịba ụba nke usoro okike, na ahịhịa dị mma yana anụmanụ ndị metụtara ya. Na mgbakwunye, n'oge ochie, o nyere onyinye nke ukwuu na nguzobe nke ógbè na mmepeanya ndị e guzobere gburugburu oke mmiri mmiri a.
Aha ọdọ mmiri ndị a bụ Huron, Superior, Ontario, Michigan na Erie. Ha niile dị n’etiti Canada na United States. Ha zuru oke maka iwepụta gburugburu ebe obibi na njem nlegharị anya na-atọ ụtọ ma nwee akụ na ụba. Na mgbakwunye, maka ndị njem na ndị njem, Nnukwu Osimiri a bụ ezigbo nhọrọ iji were ezumike dị mma ma ọ bụ ezumike kwesịrị ekwesị.
Ọzọ anyị ga-akọwa ọdọ mmiri ọ bụla na njirimara ha bụ isi
Ọdọ a bụ nke kacha nta na 5. Agbanyeghị, ejila obere okwu gbaa ọsọ, ebe ọ bụrụ na anyị jiri ya tụnyere nke a na-emekarị, nke a buru ibu. Ọ bụ ya ka ọrụ ụmụ mmadụ kacha emetụta. O di gburugburu obodo na oru ugbo. Omume a nke mmadu na-eme ka ọdọ mmiri na-enweta ụfọdụ mmetụta gburugburu ebe obibi nke na-eyi egwu mmebi ya.
O dighi omimi dika ndi ozo nke Osimiri Ukwu ahu ma ya mere ha na ekpomoku n’udu mmiri na udu mmiri. Kama nke ahụ, n'oge oyi, anyị nwere ike ịchọta ya oyi kpọnwụrụ akpọnwụ. N'ihi nri nke ala ndị dị n'akụkụ ọdọ mmiri ahụ, enwere ike iji ọrụ ubi mee ihe. Agbanyeghị, ọrụ ndị a na-ebute ụfọdụ mmetụta na mmiri na ala, na-ebute mmetọ na-emebi ọdọ mmiri ahụ.
Mgbatị ya na-ekpuchi mpaghara dị ka Ohio, New York, Ontario, Indiana, na Pennsylvania.
Ọdọ mmiri a bụ nke atọ kachasị ukwuu ma e jiri ya tụnyere ndị ọzọ. Ejikọtara ya na Lake Michigan site na oghere hydraulic nke a maara dị ka Strait of Mackinac. Ọ bụ ebe nwere ọtụtụ njem nlegharị anya ebe ọ nwere ụsọ mmiri na okwute okwute nwere nnukwu ala.
Mgbakwunye ya gụnyere obodo ndị dị ka Michigan na Ontario. Osimiri Saginaw bụ isi mmiri na-asọ asọ.
Anyị na-agafe na nke abụọ kachasị ukwuu na Osimiri Ukwu 5 ndị ​​a. Ọ dị na United States na enweghị ókè ya na Canada. Akụkụ ya dị 307 km n’ogologo na ihe karịrị kilomita 1600 nke ụsọ oké osimiri. Ọ dị na mpaghara ebe oyi na-atụ. Nke a anaghị eme ka ọ bụla na-erughị a oyi njem nleta mma.
Akụkụ ndịda bụ ihe a na-agakarị dịka ọ na-ekpo ọkụ ma nwee isi obodo ukwu abụọ. Ha bụ Chicago na Milwaykee. Mpaghara ya gafere Illinois, Michigan, Indiana na Wisconsin.
Ọdọ mmiri Ontario
Ọdọ a bụ nke kachasị omimi. N'ozuzu ya, ọ dị ka Erie, obere, mana miri emi. Ọ bụ nnukwu njem nleta dị mkpa dị ka Toronto na Hamilton. Ọ gafere akụkụ ụfọdụ nke Ontario, New York, na Pennsylvania. Gburugburu ya na-eme nri karịa nke nkịtị, yabụ na-erigbu ugbo. Naanị akụkụ nke New York ka a na-erigbu ọrụ ugbo ma ọ bụ obodo mmepe.
Aha ya na-agwa anyị ugbu a na ọ bụ ọdọ mmiri kacha ukwuu na ogologo oge na nnukwu Osimiri niile. Ọ bụ ọdọ ahụ nwere oke mmiri na mmiri dị ọcha na mbara ụwa niile. O nwere mmiri dị ukwuu nke na ọ ga-enwe ike ijuju ọdọ mmiri 4 ndị ọzọ ma hapụ ọbụna ọtụtụ mmiri dị iji jupụta ọtụtụ ọdọ mmiri. Ọ bụ ọkwa ọzọ na nkwanye ùgwù maka ndị gara aga. Ọ bụ nke kachasị oyi na ndị niile gụnyere obodo Michigan, Minnesota, Ontario na Wisconsin.
Dika odi ala oyi a, otutu mmadu ebighi ebi. Na gburugburu anyị na-ahụ oke osisi nke nnukwu njupụta, ndị bi na ya ma kụọ. Ala ndị ahụ anaghị eme nri, n’ihi ya, ha ekwesịghị ịdị na-akọ ugbo.
Curfọdụ ịmata ihe nke nnukwu ọdọ mmiri
N'ime Oke Osimiri anyị nwere ike chọta ihe karịrị ụdị ahịhịa na anụmanụ 3.500.
Ọdọ Mmiri Eluigwe nwere ikike dị omimi karịa oke osimiri karịa ọdọ mmiri.
E nwere ihe karịrị agwaetiti 30.000 gbasara na ọdọ mmiri 5, ma ọ bụghị obere ihe na ha enweghị ike ibi.
N’akụkọ ihe mere eme nile, ụgbọ mmiri ekpuola ọtụtụ n’ọdọ mmiri ndị ahụ.
Elu ala ahụ buru ibu nke na ha nwere ike ịmalite oké ifufe dị ike ka nke nke oké osimiri.
Enwere m olile anya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere Nnukwu Osimiri nke ụwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Osimiri Ukwu nke North America
Ugwu Olympus site na Mars